Kubudirira neRetail Marketing Management System | Martech Zone
Kubudirira neRetail Marketing Management System
Svondo, May 29, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kumhanyisa diki rezvitoro ibasa rakaoma, iro rinoda kuti muridzi webhizinesi ave chikamu chemusika uye chikamu mutengesi mukuwedzera pakumhanyisa bhizinesi ravo. Ini ndangobva kugamuchira tsamba kubva kuna Elliot Yeo kubva Kubudirira, software yekushandisa yakavakirwa kubatsira vashoma vatengesi nekumhanyisa uye nekuvandudza bhizinesi ravo.
Kana iyo system iine ruzivo nezve yako yekutengesa uye kushambadzira, inopa zvine hungwaru kurudziro:
Zvakare, iyo sisitimu ine yakadzama kushambadzira manejimendi sisitimu yekukupa iwe nemhinduro pane ako kushambadzira kuyedza.
Simba reTrive nderekuti rinopa ruzivo runoshamisa pane zviitiko mukati mebhizinesi rako. Ndingafarire kuona iyo system zvakare yekutarisa local search mhedzisiro, kutarisisa munharaunda uye nzira yekubatanidza kushambadzira nharembozha mukati mebhizinesi. Zvakawanda zvezvidiki zvevatengesi zviitiko zvinogadzirwa kuburikidza nekudzokorora bhizinesi uye upsell mikana - kuisa email kana meseji kune vako vatengi kunogona kutyaira madhora nekukurumidza kune yako yepazasi mutsara!
Heino pfupi vhidhiyo inotsanangura Kubudirira:
Mukuongorora saiti iyi, ndine chokwadi chekuti timu yakazara nemaoko Pos kusangana - saka pamwe iyo yeku-saiti yekutarisa ichauya pasi nemugwagwa!